CFB chigadzirwa Chikumbiro
Zvinotevera zvimwe dzakananga mafomu ose CFB mabheyaringi
Nokuda wemishonga zvinhu zvivako uye mabasa, CFB zvigadzirwa zvave yainyanya uye aitsigira pane zvavo mabheyaringi kuzvipira lubricating. Mutete-namasvingo yakarongeka, duku kukura, chiedza kurema, nyore kushandisa EU ruoko. Zvichienderana zvokunyama ehupfumi ari kusakara nemishonga paiva PTFE muvhenganiswa CF zvigadzirwa kuti zvakaoma yokuzvigadzirisa hakungagoni refueled kana zvakaoma wedzera, hapana mafuta lubrication uye zvishoma mafuta lubrication nguva. Panguva kushandiswa, asi PTFE musanganiswa anoumba kutamira firimu chinodzivirira grindstone nomubato kubva kuruma. PTFE blends kupa yakanakisa kusakara nemishonga uye pasi coefficient kuti kukweshera, uyewo mwero elasto-plasticity, izvo anoparadzira kunetseka mhiri navanopinda kuonana nomumativi pakudaro kunowedzera mutoro akatakura anokwanisa EU zvigadzirwa (ona). Naizvozvo, EU zvigadzirwa vari dzakakodzerana kutenderera, Swing, axial zvishoma nezvishoma mumatope uye dzimwe nguva.
Typical mafomu mu indasitiri ino zvinosanganisira:
Throttle, akamedura, batira chitiviri, girazi kuchinja mashandiro, wiper, hwindo vachasimudza mashandiro, sunroof mashandiro, joystick, mukova mukova hinji zvechizarira, chigaro bhandi tensioning mashandiro, chigaro kuchinja mashandiro, Carburetor, hunde, ndedzechokwadi, chinjikira shamhu bhora musoro, throttle, gozvo, gozvo, yellow simbi uye zvichingodaro.
Agricultural michini uye chikafu muchini
Nematarakita anofamba, sangana vakohwi, balers (uswa, mashanga, etc.); balers, nyama kubudiswa midziyo, mbatatisi vakohwi, sprayers, zviyo dryers, kudyara miti, doro midziyo, etc.
Construction michini, nezvifambiso muchini
Hydraulic Vacheri, hydraulic anosimudza, kongiri mixers, forogo vachasimudza marori, hydraulic sepombi, bhanhire tensioners, Cranes, dhaka marori, nhovo forklifts, pneumatic anosimudza, zvikatapira, escalators, Liquid aizomupa midziyo, divi vachizvitakudza uye tichibvisa michina.
Household midziyo yemagetsi, zvokutengeserana midziyo, chipatara midziyo
Air conditioners, vacuüm cleaners, MICHINA yokusuka ndiro, yokusona, washing machine, sefiriji, photocopiers, vaidhinda, scanners, tsamba kubudiswa hurongwa, tsamba kufambira mano, mazino midziyo, X-ray zvokushandisa, anodawo pamatafura uye zvakafanana.
Mabhasikoro, midhudhudhu, maturusi hwemvura rwebhuruu Machine, reciprocating jeko, Gerong muchina, Whitehead Textile muchina, knitting muchina, bhatani muchina, kavha hurongwa, achiuroverera michina midziyo, girazi mukugadzira michina.
CFB ruoko Kazhinji pachii inoratidza kushanda uye muganhu lubrication zvakatipoteredza, kunyanya dzikapupurira buri ruoko design, zvakanaka kuti haana kuramba kana kudzokororwa refueling nguva, asi ari vasiri lubricating ezvinhu, CFB Kureba ruoko kunobva kubereka, pamusoro nokukurumidza , unyanzvi ambient tembiricha nezvimwe mukukurukurirana. Panguva iyoyowo, romukati pose ruoko epurasitiki rukoko inogona kusiyiwa Kuumbwa kwacho asati nokuumba, inogona kupatsanurwa kupinda chigaro gomba kuti kukura nani gungano.
Gear pombi, pombi, pisitoni pombi, bhora mavharuvhu, shavishavi mavharuvhu, nokusanganisa mavharuvhu, kuzvidzora mavharuvhu, reciprocating mhepo compressor, hydraulic mabhureki, Centrifugal compressors, hydraulic sepombi.